'दूध उत्पादन बढ्यो तर बजारमा अभाव'
'दूध उत्पादन बढ्यो तर बजारमा अभाव' 'दूध उत्पादन बढ्यो तर बजारमा अभाव'
जनतापाटी सोमवार, श्रावण २०, २०७६, ००:०१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा दुग्ध अभाव भएको छ । डेरी उद्योगहरूले उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कटौती गरेकाले मुलुकभर मागअनुसार दूध आपूर्ति हुन नकेको हो । विगत वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष दुधतको उत्पादन बढेपनि बजारमा भने अभाव देखिएको छ । नेपालमा उत्पादन गर्न महंगो पर्ने तर बाहिरबाट धुलो दूध आयात गरेर विक्रि गर्दा केही प्रतिशत सस्तो पर्ने बताइन्छ ।
दूध कम उत्पादन हुने (लिन) सिजनको मध्य समय पर्नु र भारतबाट स्कीम मिल्क पाउडर (एसएमपी) आयात बन्द हुँदा उद्योगमा दूध अभाव भएको हो । नेपालमा दूध उत्पादन र अपूर्तिको तलामेलका विषयमा नेपाल दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटासँग जनतापाटीका पंकज धामीले गरेको यो कुराकानी
अहिले देशभरी दुधको अभाव भएको खबर आएका छन् । दुधको अभाव भएकै हो ?
देशमा उत्पादन क्षमता दिनप्रतिदिन बृदि्ध हुँदै गएको छ । गतवर्षभन्दा उत्पादन बढ्दै गएको छ । गत वर्ष किसानहरुले दुध पोख्नुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो । त्यती बेला बिदेशबाट धुलो दूध आयात हुँदै आएको थियो । यहाँ उत्पादन गरिएको दुधले बजार पाएको थिएन् ।
बाहिरबाट आएको धुलो दुधको मूल्य कम हुनु र यहाँ उत्पादन भएको दुधको मूल्य बढी हुनुले किसानले दुःख पाएका थिए । बाहिर बाटआएका दुग्ध पदार्थका कारण यहाँका किसानहरु पलायन हुन्छन् भनेर विदेशबाट आयात हुने दुग्धलाई बन्द गरियो । गत वर्ष धेरै डेरी उद्योगहरुले धुलो दुध बनाएनन् ।
त्यसैले अहिले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सर्टेजको हावा दिने, धुलो दुध आयात गर्ने र किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध होल्ड गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने । अहिले ७ प्रतिशत भन्दा बढी दुध उत्पादन भएको छ तर कसरी अभाव सिर्जना भयो यो विषय गमि्भर छ । अहिले विदेश गएको जनशकि्त समेत फर्केर आएर नेपालमै पशुपालनमा लागेका छन् । अब हामीले फेरि पनि भारतबाट दुध आयात गर्ने हो भने के हुन्छ ? यो विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै सर्टेजको अवस्था होइन् ।
धुलो दुग्ध आयात बन्द गर्नुले पनि अभावको ढोङ पिटिएको त होइन ?
केही हदसम्म यो सहि छ । एक पटक धुलो दुध ल्याएपछि टनका टन धेरै दुध आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । युरोपियन देशबाट ल्याउने हो भने धुलो दुध सस्तो आउने कारणले बटर मिसाएर फेरि दुध बजारमा पठाउन सकिन्छ । तर धेरै अफ्ठ्याराहरु छन् । धुलो दुध चाहिन्छ भने त्यसलाई सहजिकरण गर्नका लागि बरु भारतबाट अहिले कच्चा दुध ल्याएर उद्योग बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
हिजो भन्दा आज दुध थपिएको छ । तर हिजो दुध कम उत्पादन हुँदा बजारमा दुध विकेन, अहिले बढी उत्पादन हुँदा अभाव हुने कुराको समिक्षा हुनु जरुरी छ ।
भारतबाट आउने सि्कम मिल्क पाउडर (एसएमपी)लाई नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
चितवन मिल्कमा अहिले १ लाख लिटर धुलो दुध बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरि ६० हजार लिटर सुजल मिल्क पोखरामा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने, ५० हजार लिटर विराटनगरमा उत्पदान गर्न सकिन्छ । एक दिनमा करिब २ लाख लिटर धुलो दुध बनाउन सक्छाँै । ड्राई सिजनसम्म कति दुध आवश्यक छ भन्ने तय गरेर उद्योगहरुले उत्पादन थाल्नुपर्‍यो ।
नेपालमा दुध उत्पादनको क्षमता र आवश्यकताबीच कतिको तालमेल छ ?
अहिले एक जना स्वस्थय मानिसले ९४ लिटर दुध खानुपर्छ । तर अहिले ७२ लिटर मात्रै पुगेको छ । अहिले २२ लाख मेटि्रक टन दुध उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीसंग छ । अझै पनि ५, ६ लाख मेटि्रक टन दुध अपुग छ । यो पेसालाई व्यवसायीक बनाउने हो भने नेपालमा मात्रै होइन् बाहिर समेत निर्यात गर्न सक्छां हामी । नेपालका केही उद्योग बाहेकले एसएमटी बनाएका छन् । बाहिरबाट सस्तोमा आउँछ, हामीले किन किसानको दुध महंगोमा किनेर उत्पादन गर्ने भन्ने मानसिकताका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एभीएल महिला भलिबलमा चितवन टाइगर्स र आर्मी भीड्दै शनिवार, आश्विन १३, २०७५, १४:४२:००
ज्योती विकास बैंकको खुद नाफा ५४ प्रतिशतले वृद्वि मंगलवार, पुष २९, २०७६, १३:२७:००